CAN - ewa.mg
Nodimandry i Jaona Elite
Samy hiatrika ny lalao manasa-dalana avokoa ny ekipan’i Ejypta sy Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra lalaovina amina tora-pasika na ny CAN Beach Soccer, tanterahina any Ejypta. Faharesena tamin’ny alalan’ny isa 4 noho 2 no nanjo ny Barean’i Madagasikara nanoloana ny Faraonan’i Ejypta, mpampiantrano, omaly, nandritra ny andro faharoan’ny lalaom-bondrona. Tamin’ny andro voa-lohany dia lavon’ny Barea tamin’ny alalan’ny isa 4 noho 3 ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Samy tsy ho any amin’ny dingan’ny manasa-dalana kosa ity farany sy Maraoka. Lavon’i Maraoka, tamin’ny alalan’ny isa 5 noho 4, ny ekipan’i Côte d’Ivoire, omaly. Mitana ny laharana voalohany, taorian’ireo fandresena roa azony, ny Ejyptiana. Tamin’ny andro voalohany dia tamin’ny isa 6 noho 1 no nandresen’izy ireo an’i Maraoka. Laharana faharoa kosa i Madagasikara ary mbola manana lalao iray hoentina hanamafisana ny tapakilan’ny manasa-dalany izy ireo, anio. Hihaona amin’i Maraoka isika amin’izany. Ho an’ny vondrona B kosa indray dia efa tafita hiatrika ny lalao manasa-dalana i Sénégal sy Nizeria, raha efa naman’ny mangoron’entana i Tanzania sy Lybia. Tamin’ny alalan’ny “tirs au but” (2 – 0) no nivoahan’i Sénégal ho mpandresy, nanoloana an’i Nizeria, tamin’ny andro voalohany, raha resin’i Lybia tamin’ny isa 5 noho 2 i Tanzania. Tamin’ny andro faharoa indray dia resin’i Sénégal tamin’ny isa 12 noho 2 i Tanzania, raha tafavoaka ho mpandresy nanoloana ny ekipan’i Lybia, tamin’ny alalan’ny isa 6 noho 3, kosa i Nizeria. Mbola nibata fandresena ihany koa ity farany, omaly, nanoloana an’i Tanzania (4 – 2). Hiatrika ny lalao farany ho azy i Sénégal, anio, manoloana an’i Tanzania. L’article BEACH SOCCER – «CAN 2018» :: Tafita amin’ny manasa-dalana ny Barean’i Madagasikara est apparu en premier sur AoRaha.